ဗြိတိသျှရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လူးဝစ်မောင့်ဘက်တန် ရဲ့ ရေခဲဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော လေယာဉ်တင်သင်္ဘော(ICE SHIP)
a fella | 20/01/2021 | News | No Comments
၁၉၄၂ ခုနှစ်အတွင်း ဂျာမန်ယူဘုတ်တွေရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းမှာ မဟာမိတ်တို့ရဲ့ကုန်သင်္ဘော တော်တော်များများ ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေ လုံလုံလောက်လောက် မရှိတာကြောင့်လည်း ယူဘုတ်တွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ အခက်ကြုံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ စစ်လက်နက်သုတေသနအဖွဲ့ အကြီးအကဲဖြစ်သူ ဗြိတိသျှရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လူးဝစ်မောင့်ဘက်တန် (Louis Mountbatten)ဟာ သူ့ရဲ့သုတေသနအဖွဲ့က ပညာရှင်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Geoffrey Pyke က ရေခဲကိုအသုံးပြုပြီး လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတစ်စင်း စမ်းသပ်တည်ဆောက်ဖို့ အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။ Pyke ရဲ့ အကြံပေးချက်ကို အင်္ဂလန်ဝန်ကြီးချုပ် ဝင်စတန်ချာချီက သဘောတူတာကြောင့် သင်္ဘောတည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ ကနေဒါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကျောက်ဆောင်ထူထပ်တဲ့ဒေသက Lake Patricia ရေကန်ကြီးထဲမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ သင်္ဘောတည်ဆောက်ရာမှာ သုံးတဲ့ရေခဲဟာ လွှစာမှုန့်နဲ့ ရေကိုရောပြီးခဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သာမန်ရေခဲကို လက်နက်ကျည် ထိမှန်ပါက ကွဲအက်ပြီး တစ်စစီဖြစ်သွားတတ်ပေမယ့် လွှစာမှုန့်ပါဝင်တဲ့ ရေခဲကတော့ တော်ရုံကျည်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
အဲဒီနည်းစံနစ်ကို ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင့်ဘက်တန်ကိုယ်တိုင် သေနတ်နဲ့ပစ်ပြီး စမ်းသပ်ချိန်မှာ သေနတ်ကျည်ဆံဟာ ရေခဲထဲကို မထိုးဖောက်နိုင်ဘဲ ချော်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ရေခဲရဲ့အမည်ကိုတော့ တီထွင်သူ Pyke ကို ဂုဏ်ပြု ပြီး ‘Pykrete’ လို့ အမည်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပေ ၄၀၀၀ အရှည်ရှိပြီး ပေ ၆၀၀ ကျယ်မယ့် အဲဒီသင်္ဘောရဲ့ကိုယ်ထည်ကတော့ ဗုံးဆန် အမြောက်ဆံတွေရဲ့ ဒဏ်ကိုခံနိုင်ဖို့အတွက် အနည်းဆုံး ၃၅ ပေ အထူရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှာတော့ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းက စစ်ရေးအခြေအနေတွေ တော်တော်လေး ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီး မဟာမိတ်စစ်သင်္ဘောတွေဟာ ဂျာမန်ရေတပ်အပေါ်မှာ တဖြည်းဖြည်း အသာစီးရလာခဲ့ပါတယ်။
လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအသစ်တွေလည်း ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အတွက် ယူဘုတ်တွေ ခေါင်းမထောင်နိုင်တဲ့ အခြေအနေရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ယူဘုတ်တွေရဲ့ရန်က အေးသွားခဲ့ပြီး မဟာမိတ်တို့အတွက် စစ်သုံးစရိတ်တွေလည်း လျှော့ချဖို့လိုအပ်လာတာကြောင့် ၁၉၄၃ သြဂုတ်လမှာ ရေခဲသင်္ဘော တည်ဆောက်ရန် စမ်းသပ်မှုများအားလုံးကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ပြီး တဝက်တပျက် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်တဲ့ စီမံကိန်းကို အပြီးတိုင် ဖျက်သိမ်းခဲ့ကြပါတယ်။
ဗွိတိသြှရတေပျဗိုလျခြုပျကွီး လူးဝဈမောငျ့ဘကျတနျ ရဲ့ ရခေဲဖွငျ့ တညျဆောကျထားသော လယောဉျတငျသင်ျဘော(ICE SHIP)
၁၉၄၂ ခုနှဈအတှငျး ဂြာမနျယူဘုတျတှရေဲ့ တိုကျခိုကျမှုကွောငျ့ အတ်တလန်တိတျသမုဒ်ဒရာအတှငျးမှာ မဟာမိတျတို့ရဲ့ကုနျသင်ျဘော တျောတျောမြားမြား ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယျ။ လယောဉျတငျသင်ျဘောတှေ လုံလုံလောကျလောကျ မရှိတာကွောငျ့လညျး ယူဘုတျတှကေိုနှိမျနငျးဖို့ အခကျကွုံခဲ့ရပါတယျ။
အဲဒီပွသနာကို ဖွရှေငျးဖို့အတှကျ မဟာမိတျတပျဖှဲ့ရဲ့ စဈလကျနကျသုတသေနအဖှဲ့ အကွီးအကဲဖွဈသူ ဗွိတိသြှရတေပျဗိုလျခြုပျကွီး လူးဝဈမောငျ့ဘကျတနျ (Louis Mountbatten)ဟာ သူ့ရဲ့သုတသေနအဖှဲ့က ပညာရှငျတှနေဲ့ တိုငျပငျခဲ့ပါတယျ။
အဲဒီအခြိနျမှာ သိပ်ပံပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ Geoffrey Pyke က ရခေဲကိုအသုံးပွုပွီး လယောဉျတငျသင်ျဘောတဈစငျး စမျးသပျတညျဆောကျဖို့ အကွံပေးခဲ့ပါတယျ။ Pyke ရဲ့ အကွံပေးခကျြကို အင်ျဂလနျဝနျကွီးခြုပျ ဝငျစတနျခြာခြီက သဘောတူတာကွောငျ့ သင်ျဘောတညျဆောကျရေး လုပျငနျးတှေ စတငျခဲ့ပါတယျ။
တညျဆောကျရေး လုပျငနျးတှကေိုတော့ ကနဒေါနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ကြောကျဆောငျထူထပျတဲ့ဒသေက Lake Patricia ရကေနျကွီးထဲမှာ ပွုလုပျခဲ့ကွတာပါ။ သင်ျဘောတညျဆောကျရာမှာ သုံးတဲ့ရခေဲဟာ လှစာမှုနျ့နဲ့ ရကေိုရောပွီးခဲထားတာဖွဈပါတယျ။ သာမနျရခေဲကို လကျနကျကညျြ ထိမှနျပါက ကှဲအကျပွီး တဈစစီဖွဈသှားတတျပမေယျ့ လှစာမှုနျ့ပါဝငျတဲ့ ရခေဲကတော့ တျောရုံကညျြဒဏျကို ခံနိုငျရညျရှိပါတယျ။
အဲဒီနညျးစံနဈကို ဗိုလျခြုပျကွီးမောငျ့ဘကျတနျကိုယျတိုငျ သနေတျနဲ့ပဈပွီး စမျးသပျခြိနျမှာ သနေတျကညျြဆံဟာ ရခေဲထဲကို မထိုးဖောကျနိုငျဘဲ ခြျောထှကျသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီ ရခေဲရဲ့အမညျကိုတော့ တီထှငျသူ Pyke ကို ဂုဏျပွု ပွီး ‘Pykrete’ လို့ အမညျပေးလိုကျပါတယျ။
ပေ ၄၀၀၀ အရှညျရှိပွီး ပေ ၆၀၀ ကယျြမယျ့ အဲဒီသင်ျဘောရဲ့ကိုယျထညျကတော့ ဗုံးဆနျ အမွောကျဆံတှရေဲ့ ဒဏျကိုခံနိုငျဖို့အတှကျ အနညျးဆုံး ၃၅ ပေ အထူရှိရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၄၃ ခုနှဈမှာတော့ အတ်တလန်တိတျသမုဒ်ဒရာအတှငျးက စဈရေးအခွအေနတှေေ တျောတျောလေး ပွောငျးလဲသှားခဲ့ပွီး မဟာမိတျစဈသင်ျဘောတှဟော ဂြာမနျရတေပျအပျေါမှာ တဖွညျးဖွညျး အသာစီးရလာခဲ့ပါတယျ။
လယောဉျတငျသင်ျဘောအသဈတှလေညျး ရောကျရှိလာခဲ့တဲ့အတှကျ ယူဘုတျတှေ ခေါငျးမထောငျနိုငျတဲ့ အခွအေနရေောကျလာခဲ့ပါတယျ။ ယူဘုတျတှရေဲ့ရနျက အေးသှားခဲ့ပွီး မဟာမိတျတို့အတှကျ စဈသုံးစရိတျတှလေညျး လြှော့ခဖြို့လိုအပျလာတာကွောငျ့ ၁၉၄၃ သွဂုတျလမှာ ရခေဲသင်ျဘော တညျဆောကျရနျ စမျးသပျမှုမြားအားလုံးကို ရပျဆိုငျးခဲ့ပွီး တဝကျတပကျြ ဆောကျလုပျပွီးစီးနပွေီဖွဈတဲ့ စီမံကိနျးကို အပွီးတိုငျ ဖကျြသိမျးခဲ့ကွပါတယျ။
ဖွဲ့စည်းပုံကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ တပ်မတော်ပြောကြားချက် နိုင်ငံရေးအရ ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မလဲ
အီရန် စ၍ မွှေပါပြီ ( ၂၀၁၅နျူကလီးယားသဘောတူ ညီချက်စာချုပ်ကို မလိုက်နာတော့ဘဲ ယူရေနီ ယံသန့်စင်မှု ရာခိုင်နှုန်းကို ၂၀%အဆင့်အထိတိုးတော့မည့် အီရန် )
မောင်းသူမဲ့တင့်ကားနှင့် အမြောက်တင်ထားသည့် မောင်းသူမဲ့ယာဉ်များကို မြင်တွေ့ရတော့မည့် တောင်ကိုရီးယား တပ်မတော်….
မေတ္တာအစစ် အချစ် စစ် ဆိုတာ အသက်အရွယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးဆိုတာ သက်သေပြလိုက်တဲ့ အသက် (၈၀) နီးပါး အဖိုးအိုရဲ့ မင်္ဂလာပွဲ
ယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာ ဒေါက်တာ ဆာဆာ ရဲ့ Generation Z ကိုပေးစာ
ကမာရွတ် လှည်းတန်းက လူစုခွဲခံလိုက်ရတဲ့ Gen Z လူငယ်လေးတွေကို FREE RIDE ပို့ပီး အပြန် နောက်ခန်းထဲကို ကြည့်မိလိုက်တော့ …..
လမ်းပေါ်မှာဖုန်းစစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…? ( လမ်းပေါ်မှာဖုန်းစစ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ ရှေ့နေသူငယ်ချင်းရဲ့ အကြံပေးချက်ပါ။ သေချာဖတ်ထားကြပါ။ )
Social Punishment စာရင်းမှာ အနုပညာရှင်တချို့နဲ့  Influencer အချို့ပါဝင်နေကြောင်း ( www.socialpunishment.com မှာ အကုန်ဖော်ပြထားပါပြီနော်..)
( ခုတော့အသိုက်မြုံတွေ ပျက်ဆီးကုန်ပြီ ) “အဖေ့ဆံပင်ကတော့ ပြန်ဖြူလာဦးမှာပဲ ဆေးဆိုးပေးမယ့် သမီးလေးကတော့ အဖေ့အနားမှာမရှိတော့ဘူး”
တိုင်းပြည်အတွက် အသက်ပေး ကြွေလွင့်သွားရတဲ့ ညီမလေးကြယ်စင်ရဲ့ ရှေ့ဆုံးကနေ ပြေးလွှားတိုက်ပွဲဝင်ပေးသွားခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးပုံရိပ်များ ဗီဒီယိုဖိုင်